repo(repo) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
रिपोमार्फत रु. २० अर्ब बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आज पुस १ गते (बिहीबार) रु. २० अर्बबराबरको रिपो जारी गर्दैछ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले १४ दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ। वाणिज्य बैंक, विकास...
भोलि रिपोमार्फत रु. २० अर्ब बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि मंसिर ९ गते रु. २० अर्बबराबरको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले १४ दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ। वाणिज्य बैंक, विकास...
बजारमा रिपोमार्फत रु. २० अर्ब पठाउँदै राष्ट्र बैंक, कस्तो छ तरलताको अवस्था ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज रु. २० अर्बको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंकले यही कात्तिक २५ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो। बैंकिङ प्रणालिमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले केही समय अघिदेखि निरन्तर गर्न रिपो जारी गर्दै आएको...
काठमाण्डौ । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार रु. १० अर्बबराबरको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले ७ दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र...
तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आज रिपोमार्फत रु. २० अर्ब बजारमा पठाउने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज रु. २० अर्बबराबरको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले १४ दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले कात्तिक ३ गते...
तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आज रिपोमार्फत रु. ३० अर्ब बजारमा पठाउने
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चुलिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको सातदिने रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको छ। अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर...
राष्ट्र बैंकले आज रिपोमार्फत रु. ३० अर्ब बजारमा पठाउने
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चुलिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको सातदिने रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको छ। अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर...
राष्ट्रबैंकले रु. २० अर्ब बिहीबार बजारमा पठाउने, ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट चुलिँदै गएपछि अस्थिर बनेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकले बिहीबार २० अर्ब बराबरको २ हप्ते रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको छ। अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनिकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायीत्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ३ बजे १५ अर्बको रिपो जारी गर्दैै
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार १५ अर्ब रुपैयाँको रिपर्चेज एग्रिमेन्ट (रिपो) जारी गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिउँसो ३ बजे बोलकबोल गरेर रिपो जारी गर्न लागेको हो। रिपोमा क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुले आवेदन गर्न सक्नेछन्। रिपोको ब्याजदर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । ५...
इ-चुरोटमा प्रतिबन्ध : स्यान फ्रान्सिस्को पहिलो अमेरिकी शहर
न्युयोर्क । अमेरिकामा इलेक्ट्रोनिक चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने स्यान फ्रान्सिस्को पहिलो शहर बनेको छ। अधिकारीहरूले मङ्गलवार पसल र अनलाइनबाट विक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेका छन्। अमेरिकाको सबैभन्दा लोकप्रिय इ-चुरोट ब्रान्ड जूल ल्याब्सको उत्पादन क्यालिफोर्नियामै हुन्छ। कम्पनीले प्रतिबन्धमाथि प्रतिक्रिया दिँदै यो...
न्यून तरलताको संकट टार्न २० अर्बको रिपो जारी हुँदै, के हो रिपो र रिभर्स रिपो ?
काठमाण्डौ । बैकिङ प्रणालीमा तरलता कम भएपछि अस्थिर बनेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकले आइतबार २० अर्ब बराबरको २ हप्ते रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको छ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनिकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायीत्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले...